Banyere Anyị - Fuzhou Technic Power Co., Ltd.
Generators Na Welders
Mmanụ ụgbọala na-enye ọkụ
Gbado ọkụ Generators
Single-adọ Electric Motor
Atọ adọ Electric Motor
Fuzhou Technic Power Co., Ltd nọ na Fuzhou City, Fujian Province, China, onye bụ ọkachamara na-emepụta na ekspootu nke dịgasị iche iche nke ngwaahịa eletriki na-ekpuchi ọkụ eletrik.（IE2, IE3 nnukwu arụmọrụ moto, GHOST moto）, nfuli mmiri (nfuli elu, nfuli mmiri, mmanụ ụgbọala wdg), mmanụ gas / mmanụ dizel na-arụ ọrụ nke KOHLER, HONDA, compressors na akụkụ ndị dị mkpa.
Ike Technic nwere ngwaahịa ya dị na obodo Fu'an. Anyị nwere osisi ngwaahịa abụọ, otu bụ maka nfuli mmiri, nke ọzọ bụ maka igwe ọkụ na mmanụ ọkụ. E nwere usoro mmepụta 5 na mmiri ọkụ mmiri anyị, yana usoro mmepụta 6 na igwe ọkụ / igwe. Enwere ndị ọrụ karịrị 200 na-arụ ọrụ na ahịhịa anyị, ọtụtụ n’ime ha na-arụrụ anyị ọrụ maka ihe karịrị afọ 10. Anyị osisi, anyị nwere ihe karịrị 20 àgwà njikwa na oge a àgwà akara equipments.
Ngwaahịa anyị niile gụnyere nfuli mmiri, injin eletriki, ndị na-enye ọkụ nwere asambodo OA zuru ezu nke TUV, INTERTEK, ISET wdg nyere EC gụnyere Ngwaọrụ 2006/42 / EC, Usoro Ntanetị 2014/35 / EU, Ntanetị Electromagnetic 2014/30 / EU; Maka mmanụ ụgbọala / mmanụ dizel na ndị welders, anyị nwekwara asambodo Noise wee kọọ 2000/14 / EC na Euro V Emission. Ka ọ dịgodị, anyị factory gafere ISO 9001.
Tụnyere ụlọ ọrụ anyị ndị ọzọ, Fuzhou Technic Power nwere uru ndị a:
1.Product dịgasị iche iche si electric Motors, mmiri nfuli, mmanụ ụgbọala generators, mmanụ ụgbọala welders wdg All nke ngwaahịa nwere oge a na aghụghọ, na kwa afọ e nwere ọhụrụ imewe ka ahịa.
2.Full asambodo dika OA, Rohs, ISO 9001 wdg
3.Strong ẹkesikpede ngalaba na n'elu 10 injinia, na-eme nile di iche iche nke OEM na ODM aghụghọ.
4.Strong QC ngalaba na ihe karịrị 10 stof nyocha àgwà si ihe na-abata mmepụta Filiks na Mbupu.
5.Wonderful sales ngalaba na-enye ọrụ zuru ụwa ọnụ ahịa. Ndị ahịa niile nwere ahụmịhe na ngwaahịa ma nwee ike inye ndị ahịa anyị ezigbo ọrụ.
Technic Power ji obi ụtọ nabata ndị ahịa si n'akụkụ ụwa niile ịbịa leta ụlọ ọrụ anyị ma kwurịta mmekọrịta azụmahịa. Obi dị anyị ụtọ ịnye ndị ahịa ngwaahịa na ọrụ ọkachamara.
N'ime afọ 15 'mmepe, Technic Power nwere ndị tozuru etozu ahịa, ndị raara onwe ha nye iji mejuo mkpa ndị ahịa. Imirikiti ndị ahịa anyị etinyela aka na ụlọ ọrụ a ihe karịrị afọ 10, yabụ ha nwere ike ijide ọnọdụ ahịa ma nye ndị ahịa ọrụ ndị ọkachamara.
Na modem mmepụta equipments, elu ọrụ usoro, ọkachamara R & D ngalaba na ahụmahụ QC otu, anyị nwere ike na-enye ndị ahịa ọ bụghị naanị ezi mma ngwaahịa kamakwa elu na-arụ ọrụ arụmọrụ.
Ike Technic abughi naanị onye na-eweta ngwaahịa, kamakwa onye na-azụ ahịa otu nkwụsị. Anyị na-enye ụdị ọrụ dị iche iche dịka ịgba izu, ịzụ ahịa, nyocha ụlọ ọrụ na nyocha dị mma dịka mkpa ndị ahịa si dị.
Ike Technic nabatara ndị ahịa si n'akụkụ ụwa niile. Ahịa afọ ojuju bụ Technic Power ịchụso mgbe niile.